Ịzụta a na-eji ụgbọala nwere ike ịbụ a akụda ọrụ. There are a few things that you can check yourself to ensure that you are getting a good vehicle and good quality. One of the most important things you need to check when buying a used vehicle is the engine crank case oil. Na nke a post anyị ga-ekpuchi otú ego ha na ihe anya n'ihi.
The nnọọ ihe mbụ anyị na-amasị ego mgbe na-achọ ihe karịrị otu eji ụgbọ ala bụ engine mmanụ. Otu n'ime ọkacha mmasị m ihe na-eme bụ ịga n'ihu na itukwu n'ime ụgbọala na-anya n'ihi na ihe ikpeazụ mgbanwe mmanụ ihennyapade si a reputable mmanụ mgbanwe ụlọ ọrụ. Lee anya na ụbọchị na agbara na a gbanwere na kwa anya na agbara na odometer a ugbu a na-agụ. Jide n'aka na ọ bụghị n'oge gara aga n'ihi na ma na agbara na ụbọchị. Ọzọkwa ego iji jide n'aka na mmanụ na-depụtara na ihennyapade ọkụ otu arọ nke mmanụ ahụ na-atụ aro site emeputa. Ọtụtụ ugboro ọ dị mfe ikpebi ihe bụ ihe ziri ezi na ịdị arọ nke mmanụ site nnọọ achọ n'okpuru hundu. Kasị emepụta depụta ya n'ebe na crank ikpe mmanụ erijueala okpu ma ọ bụ na ha nwere ihennyapade ụfọdụ ebe n'okpuru hundu nke na-enye ihe ọmụma.
Ọzọkwa ị kwesịrị ịjụ onye nwe ma ọ bụrụ na ha na-eji sịntetik mmanụ ma ọ bụ ot. Ihe kpatara ya bụ na ozugbo a ụgbọala nwere sịntetik mmanụ na-eji na crank ikpe bụ na ị na-e were na-ejikwa sịntetik zere lubrication nsogbu. Ụfọdụ ọhụrụ ugbo ala ugbu a-abịa na sịntetik mmanụ na crank ikpe si factory, na a ga-a ihennyapade n'okpuru hundu ma ọ bụ na isi nkwado-agwa gị na ụgbọala nwere ike naanị sịntetik mmanụ eji na ọ. Otu ihe na-echeta banyere synthetics bụ na ọ ga-eri gị budata ọzọ mgbe ndị nwere mmanụ mgbanwe. Mgbanwe mmanụ na mgbe mmanụ ga na-eri $20 ka $25, mgbe Mgbanwe mmanụ na synthetics ga-eri $50 ka $80 dabere na ole mmanụ na crank ikpe esetịpụ.
Osote, ị chọrọ ịga n'ihu na-emeghe hundu. Chọpụta engine crank ikpe itinye mkpisi. Na-emekarị ndị a itinye ruo nwere a odo ahụ ma ọ bụ isi. Nwere a nkikara akwa na gị. Aga n'ihu ma na sere itinye mkpisi hichaa ya anya. Then reinstall the dip stick and pull it out again and check to see that the oil is in the recommended range. The dipsticks nwere ụfọdụ ụdị markings na ha na-egosi Nchekwa operating nso nke crank ikpe mmanụ. Na-etinye ụfọdụ n'ime mmanụ na mkpịsị aka gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na nkikara akwa na ị nwere bụ na-acha ọcha, na-aga n'ihu a na-ezi anya ya. Gịnị na agba ọ bụ? Na ihe engine nke nwere 150 puku kilomita ma ọ bụ obere, o kwesịrị inwe dịkarịa ala dịtụ nke a ọlaedo ọdịdị ya. Ọ bụrụ na ọ bụ obere unyi ọ bụ dịkwa mma, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ nso oge ịgbanwe mmanụ ọzọ.
Osote, na-esi isi mmanụ ( Na m maara na-ada na-akpa ọchị, ma ịtụkwasị m obi). Ọ na-ekwesịghị nwere nsure isi na ya. Ọ na-ekwesịghị nwere a gas isi na ya ma. Ọ bụrụ na ọ na-esi ka raw gas, mgbe ahụ na e nwere nsogbu na mmanụ ụgbọala usoro na ọ nwere ike dumping raw mmanụ ụgbọala n'ime crankcase. Ọtụtụ ugboro ezie na nke a ga-gawara a ego engine ìhè.
Atule engine mmanụ bụ otu n'ime ọtụtụ ihe na-aghaghị-enyocha iji obi sie na ị na-ịzụ a ụgbọala nke ezi àgwà. Iji mụtakwuo banyere ihe ego na ụzọ kasị mma isi ego ha, gaa na anyị website @ KNWAutobody.com